कन्काई विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण
तेस्रो त्रैमासमा बैंकले रू. ४ करोड ४० लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४५ प्रतिशत बढी हो । सो अवधिमा बैंकले रू. ३ करोड १ लाख नाफा कमाएको थियो । तेस्रो त्रैमासमा बैंकले रू. २ करोड ६ लाख खराब कर्जा उठाएकाले र खुद ब्याज आम्दानी बढेकाले नाफामा वृद्धि भएको हो ।
हाल बैंकको चुक्तापूँजी रू. ५१ करोड ५० लाख छ । बैंकले रिजर्भ कोषमा रू. ८ करोड ६६ लाख छुट्याएको छ । बैंकले शेयरधनीलाई गतवर्षको नाफाबाट ३ प्रतिशत बोनस शेयर र ६ दशमलव ५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । ५ दिनयता बैंकको शेयरमूल्य उकालो लागेको छ । सोमवार भएको कारोबारमा बैंकको शेयरमूल्य अघिल्लो दिनभन्दा ८ अंक बढेर रू. १८६ कायम भएको छ ।
2019-06-04 - 180 view(s) - abhiyan